Imaphi amanye amacebiso okuphepha ababungazi ngezindawo zokuhlala? - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Imaphi amanye amacebiso okuphepha ababungazi ngezindawo zokuhlala?
Ukuba ngumbungazi wendawo yokuhlala kuhambisana nezibopho ezithile. Nazi ezinye izinsiza ezizokusiza njengoba uqhubeka.
Sebenzisana nabantu ngokuhlakanipha
Ngaso sonke isikhathikhokha futhi uxhumane nge-Airbnb. Sebenzisa isistimu ye-Airbnb yokuthumela imiyalezo ukuze uzazi kangcono izivakashi zakho futhi uzitshele okulindelwe ngohambo noma ngendawo yakho.
Funda amaphrofayili nokushiwoyo ngabantu okungenzeka babe yizivakashi zakho, futhi ufune izinombolo zocingo eziqinisekisiwe, izingosi zokuxhumana ezisebenzayo namareferensi. Uma abangaba yizivakashi bengenakho noma yikuphiukuqinisekiswa kwamaphrofayili, ungabacela ukuthi bagcwalise okuthile.
Themba unembeza wakho: Uma ungazizwa kahle ngokubhukha, ungakwamukeli.
Gcwalisa Imithetho Yendlu yakho Nemanyuwali Yendlu
Ukuqedela Imithetho Yendlu yakho ne Manyuwali Yendlu kusiza izivakashi zazi ukuthi yini okufanele ziyilindele. Faka noma yini ongathanda abantu bayazi ngaphambi kokubhukha—ngokwesibonelo, ukuthi ukubhema kuvumelekile yini (noma kukuphi lapho kuvumeleke khona), ukuthi izindawo ezithile akungenwa kuzo, iphasiwedi yakho ye-wifi, noma ukuthi izivakashi kufanele yini zikhumule izicathulo zazo ngaphambi kokuba zingene ngaphakathi.
Uma inhlekelele ihlasela indawo yangakini futhi ungathanda ukusiza ngokubungaza abantu abadinga izindlu zezimo eziphuthumayo, ungafaka indawo yakho mahhala.
Qinisekisa ukuthi unomshuwalense
Uhlelo lwe-Host Protection Insurance ye-Airbnb luhlinzeka ngokuvikelwa okuyinhloko kokuchayeka engozini okungafinyelela ku-$1,000,000 USD ngesigameko ngasinye uma omunye umuntu ongahilelekile efaka isimangalo sokulimala komuntu noma somonakalo wendlu ohlobene nokuhlala ku-Airbnb.
Ungase futhi ufune ukukhuluma nomhlinzeki wakho womshuwalense ngokwengeza isendlalelo esengeziwe sokuzivikela ngomshuwalense wakho womqashi noma womnikazi wekhaya.
Setha izimfuneko zendlu yakho
Ungadinga izivakashi ukubazigcwalise ukuqinisekisa okuthile ngaphambi kokubhukha, njenge-ID Eqinisekisiwe.
Ukufaka imali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo endlini yakho kungasiza ekukuvikeleni uma kwenzeka ingozi, njengokuchitheka kwewayini kumata.
Funda izihloko ze-Airbnb Zokubungaza Ngokufanelekile
Sikhuthaza ababungazi ukuba bacabangisise ngezibopho zabo. Ukubungaza kuphana ngezikhathi ezijabulisayo ezanelisayo, kodwa kuhambisana nezinga elithile lokuzibophezela. Sihlanganiseizihloko zokubungaza ngokufanelekile ezingakusiza uqale ufunde ngokudingekile ukuze ube umbungazi esifundeni sangakini.
Khumbula: Esimweni esiphuthumayo, noma uma ukuphepha kwakho kusongelwa, xhumana namaphoyisa endawo noma izindawo zamasevisi ezimo eziphuthumayo ngokushesha.
Ngiyifaka noma ngiyihlela kanjani imithetho yami yendlu?
Umshuwalense womninikhaya usebenza kanjani nge-Airbnb?